नेता रहर, जनता कहर – Kadar News : Oneline Digital News:
लेखक : ६० वर्षअघि राजा महेन्द्रले अमेरिका भ्रमण गर्दा राष्ट्रपति आइजनहावरसंग दुईवटा सहयोग मागेका थिए । पहिलो आफ्नो पिताजीको नाममा स्थापना भएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्तरोन्नतिमा अमेरिकी सहायता र अर्को अमेरिकी लेखापरीक्षण विज्ञ । वीपी कोइराला नेतृत्वको सरकार ‘कू’ गर्ने मानसिकतामा रहेका महेन्द्रले आर्थिक रुपमा सरकारलाई बद्नाम प्रमाणित गर्न अमेरिकी विज्ञ मागेका थिए ।
प्रकासित : १८ चैत्र २०७६, मंगलवार ०९:१४
दुई दाजुभाइ नदी किनारामा घुम्न गएछन् । घुम्दै गर्दा भाइले दाजुको खुट्टा कुल्चिन पुगेछ । दुखेको आवेगमा दाजुले भाइलाई एक थप्पड लगाएछ । केही नभनी भाइले नदीको किनारको बालुवामा लेख्यो– ‘मैले अनजानमा खुट्टा कुल्चिदा दाजुले मलाई एक थप्पड हिर्काउनु भयो । भोलिपल्ट दुवै नुहाउन नदीतट पुगेछन् । नुहाउने क्रममा भाइलाई नदीले बगायो । हत्तपत्त दाजु पौडी खेलेर भाइलाई बचायो । केहीबेर पछि भाइ सामान्य अवस्थामा आयो । उसले गम्भीर हुँदै नजिकै रहेको ढुंगामा लेख्यो– ‘धन्य, मेरो दाजुले मलाई कालको मुखबाट बचाउनु भयो ।
दाजुलाई भाइको व्यवहार अनौठो लागिरहेको थियो । उसले भाइसंग सोध्यो– ‘हिजो मैले तिमीलाई थप्पड हान्दा बालुवामा लेखेका थियौ । तर आज मैले पानीबाट उद्धार गरेको चाहिँ किन ढुंगामा लेखेको ? ’ दाजुको प्रश्न सुनेपछि भाइ भन्न थाल्यो ‘आमाले भन्नु भएको जिन्दगीमा भएका नराम्रा कुरा बालुवामा लेख्नु पर्छ । जसले गर्दा ती घट्ना छिट्टै बिर्सियोस् । अनि राम्रा कुराहरुलाई ढुंगामा लेख्नु पर्छ, ताकी ती सधैं कालजयी भएर रहिरहुन । भाइको कुरा सुनेर मुस्कुराउँदै दाजुले सोच्यो– ‘कति बुद्धिमानी भएछ मेरो फुच्चे भाइ ।
आमाले भन्नु भएको जिन्दगीमा भएका नराम्रा कुरा बालुवामा लेख्नुपर्छ । जसले गर्दा ती घट्ना छिट्टै बिर्सियोस् । अनि राम्रा कुराहरुलाई ढुंगामा लेख्नु पर्छ, ताकी ती सधैं कालजयी भएर रहिरहुन ।
त्यतिमात्र हैन, रुसी शासन खुश्चेभले संयुक्त राष्ट्रसंघमा तीनवटा महासचिव हुनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव राख्दा वीपी कोइरालाले ठाडै अस्वीकार गरेका
थिए । वीपीसंग रिसाएका खुश्चेभले भनेका थिए– ‘यतिबेला तिम्रो राजासंग भएको सुमधुर भेट सम्झिरहेको छु । मृतसागरमा राजा महेन्द्र र खुश्चेभबीच भएको भेटमा खु्रश्चेभले राजालाई डुंगा उपहार दिएका थिए ।
६ दशक राजनीतिक यात्रापछि पनि हामी ढुंगामा लेख्नुपर्ने घट्ना बालुवामा र बालुवामा लेख्ने विषय ढुंगामा कुँद्ने होडमा छौं । त्यो समयमा आफ्नालाई सेक्न अमेरिकी सरकारसंग अडिटर माग्ने नेपालको राजनीतिक मनोविज्ञान अहिले अमेरिकी सरकारले घोषणा गरेको सहयोग परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी मा आइपुग्दा पनि समभाव देखिन्छ ।
पहिला आफ्नैलाई दोषी प्रमाणित गर्न अडिटर माग्यौं, अहिले मिलिजुली खान तिम्रो अडिटिङ चाहिँदैन भन्दैछौं ।
भरोसा त आफ्नो इमानको हुनुपर्छ , हिसावको होइन । देश अरुले बनाइदेला भन्ने रोगको उपचार नहुनु नै सवैभन्दा ठूलो समस्या हो । बाउको श्राद्ध गर्न पनि प्रायोजक खोज्ने संस्कृति अन्त्य नभएसम्म समृद्धि मीठो चुट्किला बनेर इतिहासको पाहुना हुनेछ ।
पाइलट जतिसुकै सक्षम भएपनि जहाज पुरानो छ भने गन्तव्य निश्चित हुँदैन । अझ केपी र पीकेको मित्रता त्यो हात्तीको जस्तो भएको छ झगडा
गरेपनि बाली नास, मिलेर सुतेपनि बालीकै दोहोलो । भारतले नाकाबन्दी गरेपछि नेपालीले फेसबुके राजनीति छोडेर पाखुरी बजार्न थालेको भए तपसिलका गलफत्तीमा फस्न जरुरी नै हुने थिएन । त्यो बेला राष्ट्रिय झण्डाले लपेटिएका फोटाहरु सामाजिक सञ्जालमा पोतेका युवाहरुले लाटोले बाउ घुक्र्याएजस्तो भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीमाथि खनिनुमा आफ्नो वीरता देखे ।
चैतमा हलोका सियोमा मकै छरेर भारत पसेको एउटा ठिटो ५ महिनापछि मकैको बोट हेरेर आश्चर्यचकित हुँदै ‘ए लम्बा लम्बा पतेवाला पेड क्या हे’ भनेर आश्चर्य मान्ने पाखण्डी तोरीलाउरेहरु उल्टै यहाँको राजनीतिमा राजहाँस बने । फलस्वरुप सिंहदरबारको कुर्सीमा आसिन शासकभन्दा
सिंहदरबार भजाउने दलालहरु शक्तिशाली ठहर्दै आएका छन् । देशका विषय विज्ञहरु आफ्नो विषयमा कम अरु विषयमा बढी चतुर छन् ।
राजनीतिको पहिलो खुड्किलोमै पछारिएकाहरु मानवअधिकारवादी र नागरिक समाजका प्रतिनिधिको अवतारमा अनुवाद भएकाछन् । जिन्दगीमा जसले एउटा पुस्तक सग्लो पढेको छैन, तिनीहरु देशलाई काम नलाग्ने डाक्टरको पदवी बोकेर स्वघोषित बुद्धिजीवी भएर शहर पसेका छन् । एकातिर सामाजिक संरचनाका अवयवहरु यसरी विश्रृंखलित भएका छन भने अर्का्तिर सिंहदरबार यस्तो ७८ औं जिल्ला प्रमाणित भएको छ, जहाँ पस्दा मै हुँ भन्ने माइकलाल शेरहरु फर्किंदा रुझेको विरालो बन्दै निस्किएका छन् ।
प्रकारान्तरले त्रिलोकदर्शी झैं व्याख्या गरिने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अग्निपरीक्षा मध्यान्तरमा पुगेको छ । दलका प्रधानमन्त्री त धेरै भएकाछन् । तर सम्झिइने प्रधानमन्त्री बन्न सजिलो छैन् । नेताले कर्मचारीलाई गाली गलेर उम्किनु भनेको गाँजा खाएर गफ लाउनु जस्तै हो ।
निजामती सेवाको अभिभावकत्व ग्रहणसंगै जवाफदेही बनाउन सकियो भने सरकारको सफलता त्यहाँबाट शुरु हुन्छ । भारत, चीन, अमेरिकाले
सरकार सफल पारिदिन्छन् भन्ने चिन्तन उहिल्यै खोटो मोहोर सावित भइसकेको छ । यो फर्मूला विश्व दुई शक्ति राष्ट्रमा विभाजित हुँदा ताकाको कोल्ड वार समयको भूत मात्र हो । अहिलेसम्म पनि त्यही खोटो मोहोर विकाउनेहरुको दबदबाबाट मुक्त हुन नसक्नु ओरालो यात्राको प्रमुख कारण हो ।
मकैको खेती पुस्तकको भूमिकामा भनिएको छ– ‘सरकारले आफ्ना देशका कुकुरहरु भन्दा विदेशी कुकुरहरुको बढ्ता मान गर्छ तर चोर डाकाहरुबाट हाम्रो रक्षा गर्ने बखत गद्दामा सुत्ने विदेशी कुकुरहरु काम लाग्दैनन् । स्वदेशी कुकुरहरु नै काम लाग्छन् ।
ती सुखद दिनको प्रारम्भ भइदिएको भए आज नेपाली शिष्ट, सभ्य, सुसंस्कृत नेपालका समृद्ध नागरिक बन्ने थिए ।
राज्य भनेको एउटा त्यस्तो अकाट्य शक्ति हो, जसले अहिले मात्र हैन, २० वर्षपछि जन्मिनेहरुको पनि भविष्य सुरक्षित गरिदिनु पर्छ ।
नजरबन्दमा रहेका बीपी कोइरालाको स्वास्थ्य स्थिति गम्भीर बन्दै गएको थियो । भारतीय नेताहरु महात्मा गान्धी, डा. राममनोहर लोहिया, डा.
राजेन्द्र प्रसाद, डा.श्यामप्रसाद मुखर्जीहरुले मानवताको नाताले रिहाईको माग गर्दै नेपाल सरकारलाई चिठ्ठी लेखेका थिए ।
मलाई विश्वास छ यी युवकको मृत्युबाट हामी सवैलाई ठूलो क्षति हुन्छ । यिनलाई जेलमुक्त गरेमात्र बचाउने थोरै आशा बाँकी रहन्छ । विश्वेश्वरको रिहाई नेपाल भारत दुवैका लागि कल्याणकारी हुन्छ । आशा छ– तपाईंको तर्फबाट मानवीय कर्म हुनेछ ।
यता पद्मशम्शेरले पनि प्रजातन्त्रको माग गर्दै सत्याग्रहमा उत्रिएकाहरुको माग सम्बोधन गर्नकै लागि नेहरुसंग आग्रह गरेका थिए । सोही प्रयोजनका लागि नेहरुले आफ्ना अत्यन्तै निकट श्रीप्रकाशजीको नेतृत्वमा रघुनाथसिंह, राम उग्रसिंहजस्ता कानुनविद् नेपाल पठाइदिए । आन्दोलन भइरहेकै अवस्थामा मातृकाप्रसाद कोइराला र गणेशमानसिंह नेहरुलाई भेट्न गए । नेहरुले भनेका थिए– ‘तपाईंहरु के का आधारमा विवरण दिनुहुन्छ थाहा छैन मलाई । मैले पनि आफ्ना चारजना प्रतिनिधिहरु पठाएँ ।
जसमध्ये दुईजना विश्वासपात्र र भरपर्दो चरित्रका थिए । तिनीहरुले त तपाईंहरुले भन्दा बिल्कुलै अर्कै प्रकारका खबर ल्याए । तपाईंहरुले एक्कैचोटि धेरै आशा गर्नुहुन्न । तिनीहरुले महाराजलाई एकान्तमै भेटेका थिए ।’ महाराजको भनाइ छ– ‘सुधारको प्रगति आन्दोलनले गर्दा पछाडि घचेटिएको हो । दोहोरो चरित्रको यस्तो कुटिल राजनीति अहिले झन् पेचिलो बन्दै गएको छ । पहिला त कम्तिमा संवाद हुन्थ्यो, अहिले त इसारामा काम तमाम् हुन्छ ।
वडाध्यक्ष उम्मेदवारसहित ३ जना गाउँलेले दिएको ‘सगुन’ लड्डु खाँदा बिरामी भई हस्पिटल भर्ना
प्रकासित : २५ बैशाख २०७९, आईतवार १७:३७
प्रधानमन्त्री पदका लागि शेरबहादुर देउवा पार्टी सिध्याउन लागे
प्रकासित : २५ बैशाख २०७९, आईतवार १७:३२